‘चंगा चेट’ गीत : क-कस्को गोजीमा दाम छैन ? (भिडियो) « Ramailo छ
‘चंगा चेट’ गीत : क-कस्को गोजीमा दाम छैन ? (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Aug 20, 2018
समय : 5:03 pm
तीन जोडी स्टारर फिल्म फिल्म ‘चंगा चेट’को गीत रिलिज गरिएको छ । ‘गोजीमा दाम छैन’ बोलको गीतमा प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशी, परमिता राज्यलक्ष्मी राणा र सन्दिप क्षेत्री तथा सुरक्षा पन्त र रविन्द्र झाले नृत्य पस्केका छन् । प्रविण सिंहको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियो यस्तो बनेको छ :
राजनराज सिवाकोटीको संगीत तथा स्वर रहेको गीतमा हरिहर तिमल्सिनाले शब्द लेखेका छन् । स्वरमा राजनराज सँगै मेलिना राई र ग्रिष्मा सिवाकोटीले स्वर दिएकी छन् । नवराज उप्रेतीको छायाँकन र दिर्घ खड्काको सम्पादन छ । दिपेन्द्र के खनाल निर्देशित फिल्म लाई माधव वाग्ले र सर्मिला पाण्डेले निर्माण गरेका हुन् ।
पहिलो गीत रिलिज गरेसँगै चंगा चेटको प्रदर्शन मिति पनि तय गरिएको छ । सोमबार गरिएका प्रेसमिटमा फिल्म कात्तिक १६ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने जानकारी गराइयो ।